Webhupu Zvokushandisa Zvichakuchengetedza Nguva PaDhesi Dhinda - Semalt Tips
Ungave urikudzidzira iwe pachako chigadzirwa chemiti, kushanda zvakaoma kuwedzera hupenyu data inopa zvikumbiro zvako, kana kungoda kubudisa dhizino rekutsvakurudza, mamwe anozivikanwa web scraping tools anogona kuchengetedza nguva yakawanda uye anogona kuchengetedza isu. Ndosaka takurukura zvinhu zvina zvakasimba uye zvinobatsira zvekushandisa zvigadzirwa zve web zvinozochengetedza nguva yako nesimba.
Uipath inonyanya mukugadzirisa zvakasiyana-siyana zvekugadzirisa software zvakadai sekuchera screen uye zvishandiso zvekushandisa zvewebhu zvewebhu ne desktop. Uipath web scraper yaive yakakosha uye yakakwana sarudzo kune vasiri mapurogiramu uye kwete makodhi. Inogona nyore nyore kudarika iyo yakawanda yewebhu web extraction zvinetso, zvakadai seji peji, kufuta kwekutsvaga, uye PDF faira kupera. Iwe unongoda kuzarura iyo data scraping wizard uye kusimbisa ruzivo rwaunoda kubvisa. Rega ichi chigadzirwa chiite basa rayo mukati mezuva rakatarwa, uye izvo zvabuda zvichange zvakanaka chaizvo. Iwe uchakurumidza kugamuchira zvinyorwa zvakakodzera zve CSV uye Excel. Negurogiramu iyi, iwe uchakwanisa kuchinja mafomu ekuzadza nekufamba. Rega ndiuye kukuudza iwe kuti mahwendefa acho akasununguka anouya ane zvishoma, asi premium version inenge yakadhura uye haingasviki vadzidzisi veblogi vega kana webmasters.
Tanga..Io inotipa usununguko rekushanda desktop uye inobatsira kunyora data kubva kuwandu hwemaji ewebhu. Iyi shumiro inobata mapeji ose ewebhu seanokwanisa kuwana zvinyorwa uye inoita APIs kune vashandisi vayo. Kana iyo peji yawakatumira ichigadziriswa kare, uchawana API yayo pakarepo. Kana zvisina kudaro, Import.io inogona kutitungamirira kuburikidza nekugadzirwa kwekunyora matrix nekubatsirwa kwezvibatanidza uye zvinyorwa mukati maawa makumi maviri. Iyi basa rinoshamisa uye rinoshandiswa nyore kushandisa, uye iwe haudi chero unyanzvi hwokugadzira zvachose. Zvisinei, Import.io haigoni kufamba kubva pane imwe peji yewebhu kune imwe chete. Dzimwe nguva, zvinotora kusvika mazuva maviri kuti upe mhinduro dzako.
Kimono ane mukurumbira uye chimwe chezvinhu zvakanakisisa zvekutsvaga webhuti kuti uchengetedze nguva yako pane zvinyorwa. Iyi purogiramu inonyanya kuzivikanwa pakati pevanokurudzira uye vanogadzirisa vanoda kutsvaga mishonga yavo pasina mazano. Ichaponesa nguva yako sezvo iwe unogona kupa mienzaniso yakanaka uye yakaipa yekudzidzira iyi shanduro. Uyezve, API yakasikwa pamapeji ewebhu echishuvo chako uye data inogona kunyorerwa chero ipi zvayo. Kimono inoshanda zvakanyanya uye yakakosha kuwana dhizha pamusoro pekutengeswa kwematombo uye newsfeeds. Zvinosuruvarisa, hapana mapeji ekufambisa aripo, uye tichazofanira kupedza nguva yakati tadzidzise chigadzirwa ichi tisati tatobudisa nhoroondo yakarurama kwauri.
4. Chidimbu Chinyorwa: